Mahatezitra Ny Mpisera Ety Anaty Aterinetio Ny Toetran’ireo Parlemantera Okrainiana Mpanitsakitsaka Lalàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Marsa 2013 11:07 GMT
Ny marainan'ny Sabotsy 2 Martsa, tonga tao amin'ny seranampiaramanidina Zhulyany ao Kyiv handray fiaramanidina ho any Sevastopol, Crimea i Vadym Kolesnichenko, parlemantera avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondràna “Party of Regions”. Nitaky tamin'i Kolesnichenko ny pasipaorony i Yulia Pinizhanina, mpiasa iray ao amin'ny Air Onix teo ampiraketana ny mpandeha, saingy ny karatra maha-parlemantera azy no natolony ho solon'izany. Hatrizay dia ny pasipaoron'ireo mpandeha irery ihany no azo ekena ho taratasy fanamadinana rehefa mandeha fiaramanidina any Okraina, nolavin'i Pinizhanina ny hanoratra ny anaran'i Kolesnichenko amin'ny sidina rehefa tsy afaka nanome ny antontan-taratasy ilaina izy. Nahatezitra ity politisiana ity ny fanapahankeviny.
Tsy tonga saina hoe noraketin'ny mpiray sidina aminy izay nijoro teo akaiky teo an-tsary izy, nampangain'i Kolesnichenko ho nanao tsinontsinona azy i Pinizhanina no sady manitsakitsaka ny lalàm-panorenana. Norahonany horoahana izy ary, ankoatra ny zavatra hafa, nolazainy fa hahafaly azy ny hahita an'i Pinizhanina ho voaheloka sy hamafa arabe aorian'izay.
Ilay mpanao gazety, Ivanna Kobernik, izay ao amin'ny seranampiaramanidina mihitsy tamin'io fotoana nitrangan'ny fientanam-po diso tafahoatran'i Kolesnichenko io, dia nanoratra [uk] mikasika azy ity tao amin'ny pejiny Facebook tsy ela akory izay, teo amin'ny mitataovovonan'ny Sabotsy teo. Taoriana kelin'izay, takatra tao amin'ny YouTube [ru, uk] ilay lahatsary fohy nisy ny fifanakalozan-dresaka teo amin'ilay politisiana sy ilay mpiasan'ny zotram-piaramanidina, nahazo mpijery maherin'ny 94.000 tao anatin'ny herinandro iray:
Fantatra amin'ny maha-andianà barbariana azy ireo Okrainiana mpanao politika, ka nahatonga ireo izay nanaraka ilay tantara tao amin'ny seranampiaramanidina ho zendana hoe solombavambahoaka iray mpanao lalàna no tratra tsy manaja ireo lalàna izay izy sy ny mpiara-miasa aminy no nandrafitra azy.
Tao amin'ny Facebook ohatra, namela ity fanehoankevitra ity [uk] i Olha Miroshnyk :
Raha toa fotsiny ka misidina tsy misy pasipaoro ireo Solombavambahoaka e! Ilay olom-pantatro, olona iray ao an-toerana [manampahefana voafidy], aza moa tsy mahatatidy intsony hoe aiza no nasiany ny fahazoan-dalany hamily fiara ary dia nitondra fiara tamin'ny alàlan'ny karatra maha-solombavambahoaka azy foana nandritry ny folo taona, amin'izany ny polisy mpandamina fifamoivoizana indray no mipao-tsatroka aminy!
Oleksandr Spryahaylo nanoratra [uk] hoe [fr]:
Nangatahan'ny solontena iray avy amin'ny sampana mpanao lalàna ny mpiasa iray tao amin'ny seranampiaramanidina mba hanitsakitsaka ny lalàna hanomezana tombon-dahiny azy… Izany mahatonga antsika hiaina tahaka izao iainantsika izao.
Mety ho nijanona fotsiny ho anaty laharan'ireo adihevitra faoben'ireo Okrainiana politisiana, tsy hisy fiantraikany amin'ny fanovany fitondrantena ity tantara ity, apetraka fotsiny amin'ny hoe fahataitaran'i Kolesnichenko, fanaovana vava be vao maraina tamin'i Pinizhanina. Saingy nisafidy ny hanohy ny ady aty anaty aterineto ranamana, tamin'ny alàlan'ny bilaoginy Ukrainska Pravda.
Anatinà lahatsoratra iray lavabe [ru], izay nivoaka ora 12 taorian'ilay zava-nitranga tao amin'ny seranam-piaramanidina, nanoratra i Kolesnichenko fa sambany izao hatramin'ny 2006, fotoana nahalany azy tao amin'ny parlemanta, no nitakiana pasipaoro izy tamin'ny fisoratana ho amin'ny sidina anatiny. Nazavainy fa ny karatra maha-solombavambahoaka azy no nentiny nakana ny tapakila ‘kilasy ekaonomika’, maimaimpoana, zavatra efa fanao mahazatra ho an'ireo Okrainiana mpanao lalàna, ary tamin'ny voalohany dia noheveriny ho vazivazy ilay fitakiana nataon'i Pinizhanina – indrindra hatramin'ny tsy nanànan'ilay Mpampanoa lalàna amin'ny heloka bevava, Vyacheslav Pavlov, olana tamin'ny fisoratany ho amin'io sidina io ihany tamin'ny alàlan'ny karatra maha-mpiasa azy, fa tsy ny pasipaoro, teo alohan'i Kolesnichenko teo indrindra.
Tao amin'ny bilaoginy, tsy namerina ny fikasàny momba ny asan'i Pinizhanina amin'ny hoavy, ho mpamafa làlana i Kolesnichenko, fa kosa namelabelatra ny hetsika ho raisiny manaraka ny lalàna kasainy hatao amin-dramatoa io, amin'ny filazany fa nnao heloka bevava izay voafaritry ny Artikla 351 ao amin'ny tLalàna mifehy ny Heloka Bevava ao Okraina [en] (“Fanelingelenana ny asan'ny Solombavambahoakam-pirenena ao Okraina, na lefitry ny filankevi-paritra iray”).
Haingana be ny fenehoankevitry ny vondrom-piarahamonina tety anaty aterineto.
Vondrona Facebook iray [ru, uk] no natsangana mba hanairana ny saina amin'ny tranga mahazo an'i Pinizhanina sy hanakànana an'i Kolesnichenko amin'ny eritreriny hitondra ity mpiasan'ny fitaterana an'habakabaka ity [photo; ru] ho any amin'ny fandroahana.
Nanoratra [ru] i Olga Chervakova, mpanao gazety, hoe :
Fampahatsiahivana: mba hananan'ity olona ity asa [Kolesnichenko], dia nifidy azy isika. Ary mba handraisany karama, dia mandoa hetra isika.
Anna Oshchypok nanoratra [uk] hoe
[…] Ity tranga ity doa maneho fa ity olobe ity – solombavambahoaka iray ary olombelona koa etsy ankilany – dia tsy ampy fitaizàna! Iza no mba nifidy an'ireny olona ireny e? Ny ankamaroan'ny Okraininana, raha ny fandehany. Antenaiko fa mba hitombo ho amin'ny fahamatorana isika ka hamadibadika tsara rehefa mifidy!!
Tanya Husack nanoratra [ru] hoe :
[…] Solombavambahoaka Okrainiana iray SAHY NAMPITAHOTRA OLOM-PIRENENA OKRAINIANA HOE!!!!…. TSY MAINTSY tazonina ho tomponandraikitra amin'ny heloka bevava nataony..
Wetally, mpampiasa LJ, dia tonga niaraka taminà hevitra vitsivitsy [uk] momba ny fomba hanenjehana an'i Kolesnichenko: aminy, ny Lalàna momba ny Heloka Bevava [en] Artikla 27.4 (“Ny mpiray tsikombakomba dia izay olona mandrisika olona iray hafa hiray tsikombakomba hanao heloka bevava, amin'ny alàlan'ny fandemen-tsaina, fampandaingàna hanao vavolombelona mandainga, fandrahonana, fanerena na hafa toy izany”), Artikla 365 (“Fanararaotam-pahefana ataon'ireo manampahefana na mpiasam-bahoaka”) sy ny Artikla 383 (“Fanaovana tatitra diso niniana natao mikasika heloka bevava iray”) dia mety hanampy – saingy fotsiny, mazava loatra, aorian'ny fanesorana amin'i Kolesnichenko ny zo parlemantera tsy azo anenjehana azy.
Dikasary avy amin'ny angon-drakitry mikasika ny fananan'ny Air Onix avy amin'ny Kaomitium-pirenena misahana ny Fiarovana ary ny Tsenam-bola, nakarin'i Serhiy Leshchenko tao amin'ny bilaoginy.
Ao amin'ny bilaoginy, izay efa nifampizaràna in-1200 tao amin'ny Facebook fotsiny, namintina ihany koa i Kolesnichenko fa ilay trangan-javatra tao amin'ny seranampiaramanidina dia tsy maintsy nisy nifandraisany tamin'ny “fandranitana” ara-politika natao “mivantana avy any amin'ny mpitantana ilay orainasam-pifamoivoizana an'habakabaka na manampahefana hafa izay manohitra ny “Party of Regions” . Serhiy Leshchenko, mpanao gazety ao amin'ny Ukrainska Pravda dia namaly avy hatrany [ru] an'io fanambaràna io tao amin'ny bilaoginy, namoaka antontan-taratasy sy rohy izay maneho fa anà orinasa Aostraliana iray ankehitriny ny Air Onix izay ambara fa an'ny havan'ny mpitarika ny Party of Regions, PM Mykola Azarov.
Tamin'ny fanehoana hevitra amin'ny fifandraisana eo amin'ilay tantara Kolesnichenko sy ny faharatsian'ireo fotodrafitrasa ao Okraina, nofaritan'ilay mpanao gazety, Andrey Chernikov [ru], ny zavatra miseho rehefa injay ny planeta kely mbola azo iainan'ireo Okrainiana mpanao politika matahotra toerana mihidy ireo ka mandalo ôrbitan'ny planeta iainan'ireo Okrainiana tsotra :
[…] nanomboka nihinan-tena [ireo sangany mifehy amin'izao fotoana]. […] 99.9% amin'ny arabe no potika, feno fako eran'ny tanàn-dehive sy ny vohitra – ary ireny rehetra ireny koa dia manodidina ny lapaben'ireo olona eo amin'ny fahefana. Diso fantatra loatra fa tsy miraharaha izay fefy 5 metatra sy mpiambina manokana miisa 50 any ny fofona tsy hay hiainana. […] Ny zavatra mifanohitra amin'izay, tsy leon'izany ry zareo, na dia tokony ho izany aza no izy.
[…] Na ireo sangany mitondra, ana ireo olombitsy dia samy tsy ho afaka hisitraka intsony ny vokatry ny asan-dry zareo, na dia [mandoa voala ho amin'izany aza izy ireo]. Amin'ny manaraka, hisy manampahefana iray hahatsiaro hitaraina mikasika ny tsy fisian'ny herinaratra ao an-tokantranony, azo antoka 100% fa tsy maintsy hanjera ny hatezerany manontolo any amin'ilay namany mpiray antoko aminy, izay tompon'ny sasantsasany [amin'ireo mpamokatra angovo ao an-toerana]. Na raha tsy mahavita maninjara ny vokany eran'ny firenena intsony ny mpamokatra sôkôla goavana iray satria simba ny arabe ary miara-simba ireo fiara lafovidy – ho sarotra ihany ny handeha hitaraina amin'ny PM, satria ny PM milaza fa efa ho 100% amin'ny arabe no efa nasiam-panamboarana, ary ny hangataka aminy hanamboatra ny làlana dia ratsy lavitra noho ny fanaovana fifidianana fitsipaham-pitokisana na mitovy kokoa amin'ny famonoan-tena. […]
Tahaka ity ny sary amin'ny ankapobeny : ireo tompony sy ny mpanjifa ny zavatra rehetra misy eto amin'ny firenena dia vondron'olona iray izay milaza ny tenany ho tmpon'ny fahefana sy mandidy amin'ny fiainana, ary satria ry zareo tsy afaka mifampitory izy samy izy noho ny haratsian'ny tolotra sy ny zavatra ilaina, dia voatery mihafy mampiasa mangina izay azo raisina eo ry zareo. Ary rehefa ny antoko no mibaiko azy ireo hanao izany, dia tsy maintsy hiletra ny tsiron'ny fofona izay mameno ny rivotra eto amin'ny firenena ry zareo.
Raha ny momba an'i Kolesnichenko sy ny fifandroritany amin'ilay mpiasan'ny Air Onix izay tsy nanao afa-tsy ny asany, ny Talata 5 Martsa, dia niteny ny polisy [uk] fa toa tsy misy antony hatreto hanokafana fitoriana an'i Pinizhanina mikasika heloka bevava. Ny Alarobia 6 Martsa, efa sahirana sahady tamin-javatra hafa i Kolesnichenko : izy no nameno ireo lohateny lehibe [uk] noho ny fanaovany tsinontsinona ny hiram-pirenena Okrainiana, izay heveriny ho tsy dia ampy loatra hanentana fanahy.